Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Ku Tilmaamay Magaalada London Furin Dagaal.
Trump oo Ku Tilmaamay Magaalada London Furin Dagaal.
Posted by ONA Admin	/ May 6, 2018
Isaga oo aan wax weyn kasoo qaadin dhibaatada uu hubka ku hayo Maraykanka, ayaa waxa uu sheegay in uusan u dhego raaricin doonin baaqyada loo jeedinayo in uu xakameeyo hubka. Waxa uu la hadlayay ururka qaran ee buntukhleyda Maraykanka oo u ololeeya dadka hubka heysta.
Isaga oo ka hadlayay shirka Dallas ka socda ee arrimaha hubka ayuu sheegay in xuquuqda dadka ay u leeyihiin in ay hub heystaan lasoo weeraray. Ma cadda halka uu Trump kasoo xigtay xogtiisa, balse saxaafada ayaa dhawaan wareysatay dhaqtar hormuud ah oo London ku sugan kaas oo sheegay in illaa 4 isbitaal oo magaalada ku yaala ay u ekaadeen sidii furin dagaal oo Afghanistan ku taala.
Dr Martin Griffiths ayaa sheegay in bukaanada ay qaabilaan ay u badanyihiin kuwa lasoo tooriyeeyay ama xabbad lagu soo dhuftay. 138 qof ayaa u dhintay dhaawacyo kasoo gaaray toori sanadkan oo kaliya sida ay sheegeen booliiska. Sanadkii hore Trump ayaa dhaleeceeyay duqa magaalada London Sadiq Khan sidii uu ula macaamilay weerarkii argagixisada ee London lagu qaaday, balse Mr Khan ayaa Trump ugu jawaabay in dadka reer London ay aad u ixtiraamaan xuquuqda hadalka.
Waa hadal jeedintii afraad ee uu u jeediyo ururka buntukhleyda qaran ee Maraykanka muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay, iyada oo madaxweynihii ugu dambeeyay ee sidaasi sameeya uu ahaa Ronald Reagan sanadkii 1983-dii. Illaa 80,000 kun ayaa ka qeybgalaysa shirka ka socda Dallas, iyada oo ururkan uu ahaa kii taageeray Trump markii uu musharaxa ahaa sanadkii 2016-kii, iyaga oo ololihiisa ugu deeqay $11 milyan oo doolar